Weather in Thailand tamin'ny Oktobra ~ Journey-Assist - Vanim-potoana. Humidity. Aiza no aleha amin'ny Oktobra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand tamin'ny Oktobra
Weather in Thailand tamin'ny Oktobra
Amin'ny tapaky ny fararano, ny toetr'andro any Thailandy dia tena mahavariana, ary tsy misy gaga na iza na iza ny trondro monsoon. Amin'ny lafiny iray, volana Oktobra dia mamela ny olona tia fialan-tsasatra milamina sy mangingina hankafizin'ny hatsaran'ny tora-pasika sy trano fandraisam-bahiny tsy misy fotony, fa amin'izany fotoana izany dia mbola misy trangan-javatra mavesatra amin'ny oram-be tropikaly sy varatra. Alohan'ny hiaingany any Thailand amin'ny tapaky ny fararano, dia mpizaha tany ny mpizahatany manam-pahaizana mba handinika tsara ny vinavinan'ny toetr'andro sy ny tsy fitovian'ny toetr'andro teratany, izay matetika dia misy dikany lehibe. Ny kalitaon'ny fitsaharana ary ny fahatsapana ankapobeny amin'ny Land of Smiles dia miankina amin'ny faritany izay alehan'ny dia.
Ny Oktobra, ny orana sy ny orana dia mandao tanteraka ireo faritany avaratry ny Fanjakana. Na dia ao amin'ny faritra manodidina an'i Sukhothai aza, iny ihany no orana roa isan-taona. Miaraka amin'izany, misy ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny andro mandritra ny andro, manodidina ny +2 degre. Ny fiandohan'ny "ririnina tropikaly" dia tsapa indrindra ao amin'ny tanàna avaratry Chiang Mai, izay amin'ny alina dia mety hianjera amin'ny +3 degre sy ambany ao ny thermometer.
Any amin'ny faritra afovoan'i Thailandy sy any Bangkok, dia mbola mijanona ny fitondrana mony. Na dia eo aza ny zava-misy fa atsy ho atomboka ny vanin-taona mafana, ny natiora dia tsy mihazakazaka handroaka rahona eny amin'ny lanitra, ary ny orana any an-drenivohitra dia mijanona ho vahiny matetika. Ny tolakandro, ny rivotra any afovoan-firenena dia mafanafana hatramin'ny +31 degre. Ny toe-tsaina mitovitovy amin'izany dia hita any amin'ny morontsiraka avaratra any amin'ny Hoalan'i Thailand ary eny amoron'ny morontsirak'i Pattaya, izay tsy mihoatra ny +31 degre ny mari-pana ao amin'ny andavanandro ary ny rano ao amin'ny hano no manafana ny andro. Ny fitoniana havana eto amin'ity faritra ity dia tsy afaka hitranga amin'ny faran'ny volana ihany, rehefa tsy mivadika ny herin'ny monsoon.
Ny vinan'ny toetr'andro any amin'ireo nosin'ny morontsirak'i Thailandy sy ny ranomasina Andaman dia mitovitovy be: avy ny orana isan'andro, ny mari-pana dia +31 degre, ary ny rano eny amoron-dranomasina dia mafana hatrany hatrany amin'ny +29. Ny fepetra ho an'ny fialantsasatra amoron-dranomasina dia tsy tsara indrindra noho ny zava-misy fa ny ankamaroan'ny volana amin'ny moron-dranomasina dia avo be loatra ny lomano. Indraindray ny tafio-drivotra iray dia mety ho tonga sakana amin'ny sambo na sambo iray avy amin'ny iray amin'ireo nosy mankany amin'ny tanibe. Ny fahaizana mihemotra na manafoana ny datin'ny fandaozana, manitatra ny fijanonana ao amin'ny nosy dia tokony hojerena rehefa mikasa ny fialan-tsasatra any amin'ireo nosin'i Thailand.
Endrika fitsaharana amin'ny Oktobra
Fantatr'ireo mpizahatany za-draharaha fa amin'ny faran'ny Oktobra any Thailandy ianao dia afaka miala sasatra lafo, fa ny toetr'andro dia mety ho azo ekena ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina sy ny fitsangatsanganana. Mba hanaovana izany dia mila mandalina tsara ny vinavinan'ny toetrandro alohan'ny dia sy mandritra ny fitsaharana ary miomana ny "handositra" amin'ny ranonorana mivatravatra, mifindra any amin'ny morontsiraka hafa firenena.
Tamin'ny afovoan'ny fararano, nirohondrohona ny dihy mozika sy fampisehoana mozika i Thailand, izay tsy vitan'ny mpanakanto sy tarika eo an-toerana ihany, fa ny mpihira avy amin'ny firenena hafa no mandray anjara. Betsaka ireo mpitia mozika no mivory manodidina ny Festival Jazz, izay atao amin'ny Koh Samui.
Ao amin'ny faritanin'i Nong Khai, dia atao isan-taona ny Fetiben'ny Firenena Firenena iray, mifototra amin'ny tantara mystika taloha momba ny baolina manjavozavo tsy fantatra miseho ary manjavona ao amin'ny Reniranon'i Mekong amin'ny volana feno.
14 andro (228.2 mm.)
16 andro (258.0 mm.)
15 andro (246.2 mm.)
11 andro (172.8 mm.)
17 andro (275.0 mm.)
16 andro (257.8 mm.)
16 andro (257.9 mm.)
12 andro (183.7 mm.)
17 andro (261.2 mm.)
18 andro (298.3 mm.)
14 andro (214.3 mm.)
17 andro (275.7 mm.)
16 andro (246.2 mm.)
20 andro (304.0 mm.)
18 andro (297.5 mm.)
15 andro (278.3 mm.)
13 andro (192.7 mm.)
17 andro (308.7 mm.)
16 andro (249.6 mm.)
11 andro (173.0 mm.)
16 andro (257.5 mm.)
16 andro (255.8 mm.)
16 andro (255.9 mm.)
13 andro (160.5 mm.)
13 andro (193.0 mm.)
16 andro (257.2 mm.)
17 andro (275.4 mm.)
13 andro (163.3 mm.)
7 andro (117.4 mm.)
14 andro (199.0 mm.)
17 andro (275.6 mm.)
16 andro (261.4 mm.)
16 andro (255.5 mm.)
15 andro (254.6 mm.)
11 andro (173.8 mm.)
17 andro (263.4 mm.)
8 andro (132.1 mm.)
14 andro (166.1 mm.)
16 andro (256.2 mm.)
17 andro (310.7 mm.)
16 andro (204.6 mm.)
11 andro (174.1 mm.)
12 andro (189.2 mm.)
11 andro (172.9 mm.)
2 andro (38.2 mm.)
7 andro (116.3 mm.)
13 andro (168.2 mm.)